Ganacsiyadu waxay sii wadaan halganka sababaha loo adeegsado Twitter. Soo qaado nuqul ka mid ah Twitterville: Sida Ganacsiyadu ugu Noolaan Karaan Xaafadaha Cusub ee Caalamiga ah ee ay u diyaarisay Shel Israel. Waa buug fantastik ah oo dukumiinti ka dhigaya dhalashada iyo koritaanka Twitter-ka oo ah shey cusub oo la yaab leh oo ganacsiyada ay ku wada xiriiraan. Markii aan akhrinayey buugga, Shel waxay xustay dhowr sababood oo shirkaddu u rabto inay adeegsato Twitter. Waxaan u maleynayaa in qaar badan oo iyaga ka mid ahi ay mudan yihiin in la qoro…